‘म फुटबल खेलाडी नै हुँ’:अमित तामाङ- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
‘म फुटबल खेलाडी नै हुँ’:अमित तामाङ
भाद्र ३०, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — संकटाबाट क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने ‘ए’ डिभिजन फुटबलर अमित तामाङ पनि स्काइ गोल्सबाट आसन्न ‘ए’ डिभिजन फुटसल खेल्दैछन् । एन्फा एकेडेमीका उत्पादन अमितले फुटबल नभइरहेको समयमा फिटनेसका लागि फुटसल खेल्ने गरेको सुनाए । एन्फाले सन् २०१७ मा पहिलोपल्ट फुटसल राष्ट्रिय टोली निर्माण गर्दा टोलीका सदस्य रहेका थिए ।
लेफ्टब्याक उनले फुर्सदको समय उपायोग गरी फुटसल खेलेको र खेल्दाखेल्दै टिमबाट आएको अफर स्विकारेको सुनाए । भविष्यमा फुटबललाई नै निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ । ‘ए’ डिभिजन फुटसल खेल्ने ‘हाइप्रोफाइल’ फुटबल खेलाडी उनै अमित तामाङसँग दोहोरो अनुभवबारे गरिएको कुराकानीको अंश :
‘ए’ डिभिजन फुटबल खेलिराखेको खेलाडी किन फुटसल छाडेर यता आउनुभयो ?
मैले फुटबल छाडेको छैन । हाम्रो फुटबलका लागि अहिले माहोल नै भएन । हामी उपत्यकाबाहिरका खेलाडीका लागि त झन् खेल्ने ठाउँ नै भएन । संकटाको मैदान त छ तर त्यहाँ गएर खेल्ने म एक्लो हुन्छु । त्यसैले ट्रेनिङदेखि फिटनेसका लागि फुटसल खेलिरहेको छु । म फुटसलको राष्ट्रिय टोलीबाट पनि खेलिसकेको छु । पहिलो राष्ट्रिय टोलीको सदस्य थिएँ । फिटनेस बनाइराख्न पैसा तिरेर फुटसल खेलिरहेको छु । त्यसरी खेल्दै थिएँ, दाइहरूले टिममा आएर खेल्न भन्नुभयो अनि यो टिमबाट खेल्न लागेको हुँ ।
फुटसलको राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसक्नुभएको छ । फुटबलको राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा पनि निरन्तर हुनुहुन्छ । तपाईंको प्राथमिकताचाहिँ के हो ?
फुटसल र फुटबलमा म तुलना गर्दिनँ । मेरो पहिलो प्राथमिकता फुटबलमात्र हो । एन्फा एकेडेमीमा रहेर फुटबल सिक्दै गर्दा पनि म अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलर बन्छु भन्ने सपना नै थियो । त्यहााबाट पनि राष्ट्रिय टोलीमा पर्न मैले धेरै प्रयास गरें । यू–१४, यू–१६, यू–१७ र यू–१९ उमेरसमूहको राष्ट्रिय टोली हुँदै सिनियर टोलीमा पनि पर्छु, तर अन्तिम टिममा कहिल्यै पर्दिनँ । शीर्ष ३० सम्म सधैं हुन्छु ।
अन्तिम टिममा राख्न कसैले विश्वास गरिरहेका छैनन् । मैले आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि अवसर पाउनुपर्‍यो नि ? कहिल्यै अवसर नै दिँदैनन् । मेरा लागि यो सबैभन्दा निराशाजनक क्षण हो । सधैं बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइने तर कहिल्यै टिममा नराखिने अभागी खेलाडी हुँ म । कतिसम्म भने अर्कै पोजिसनका खेलाडीलाई लेफ्ट ब्याक खेलाइयो तर मलाई टिममा राखिएन । सबैको एउटा सपना हुन्छ, राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने । मेरो पनि छ । धेरै नजिकसम्म पुर्‍याइन्छ तर पाइँदैन । एन्फाले रिलिज गरेपछि क्लबबाट खेलिरहेको छु । फुटबल हुँदा फुटबल, फुटबल नहुँदा फुटसल खेलिरहेको छु । राष्ट्रिय टिममा बोलाउँदा जान्छु, क्लबलाई आवश्यक परेका बेला गइरहेको छु ।
फुटसलचाहिँ फिटनेसको माध्यममात्र हो त ?
मेरो लागि त्यस्तै भयो हजुर । ‘ए’ डिभिजन लिगका लागि हाम्रो क्लबले कात्तिकदेखि प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ । त्यसअघि आफूलाई फिट र अपडेट त राख्नुपर्‍यो । त्यसैले फुटसल खेलिरहेको छु ।
फुटसललाई नै निरन्तरता दिने हो कि ?
तत्काललाई सोचेको छैन । सायद फुटबलमै हुनेछु । किनभने मैले अहिलेसम्म जति पनि गरेको छु, फुटबलमै गरेको छु । फुटसलभन्दा ठूलो क्षेत्र हो फुटबल त्यहाँ अवसर पनि धेरै छ ।
यो प्रतियोगिताबाट राष्ट्रिय टिमका लागि पनि खेलाडी छनोट गर्ने भनिएको छ । तपाईंलाई फुटसलको राष्ट्रिय टोलीमा बोलाइयो भने के गर्नुहुन्छ ?
मेरो राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने सपना हो । फुटसलको पनि राष्ट्रिय टोली नै हुनेछ । तर त्यो समयमा ‘ए’ डिभिजन वा अन्य राष्ट्रिय प्रतियोगिता भयो भने म फुटबलमै जानेछु । किनभने फुटबल भइरहेको भए, क्लबको प्रशिक्षण भइरहेको भए म अहिले यहाँ हुँदैनथें । म फुटबल खेलाडी नै हो ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १२:०४
नेपालगन्ज–पोखरा उडानले व्यवसायीमा उत्साह
भाद्र ३०, २०७८ रूपा गहतराज
नेपालगन्ज — निजी क्षेत्रको प्रयासबाट पहिलोपटक नेपालगन्ज–पोखरा र पोखरा–नेपालगन्ज सुरु गरिएको हवाई उडान सेवा नियमित भएपछि यहाँका निजी क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । पश्चिम नेपालको बाँके र बर्दियालाई प्रमुख पर्यटकीय नगर पोखरासँग सोझै जोड्ने उद्देश्यले दुई महिनाअघि सुरु गरिएको नेपालगन्ज–पोखरा हवाई उडानमा यात्रा गर्ने यात्रु बढ्दै गएपछि उडान संख्या थप गरिंदै गएको आइतबारदेखि दैनिक उडान सुरु गरिएको हो ।
लामो समयदेखि नेपालगन्ज–पोखरा सिधा उडान गर्नुपर्ने विषयमा छलफल, बहस हुँदै आए पनि यसअघि कुनै पनि हवाई कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक उडान थालेका थिएनन् । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाटा) बाँके च्याप्टरले सरकार र हवाई कम्पनीलाई दबाब दिनकै लागि गत फागुनमा उक्त रुटमा चार्टर उडान सुरु गरेको थियो ।
सीता एयरको १८ सिटे जहाजबाट सुरु गरिएको चार्टर उडानलाई कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरले असर गर्‍यो र बीचमै बन्द भयो । दुई वर्षअघि पनि बुद्ध र यती एयरले नेपालगन्ज–पोखरा उडान थाल्ने तयारी गरेका थिए तर विभिन्न कारण देखाउँदै अन्तिममा स्थगित गरे । पर्यटन व्यवसायीको चर्को दबाब, यात्रुको मागका आधारमा अहिले बुद्ध एयरले उक्त रुटमा व्यावसायिक उडान सुरु गरेको हो । कम्पनीको १९ सिटे जहाजबाट तत्कालका लागि साताको तीन दिन आइतबार, बुधबार र शुक्रबार उडान सुरु गरिए पनि गत आइतबारदेखि दैनिक रूपमा उडान थालेको बुद्ध एयरका नेपालगन्ज स्टेसन प्रमुख विनित शाहले बताए । नेपालगन्ज–पोखरा रुटमा यात्रुलाई आकर्षण गर्न विभिन्न प्याकेज पनि ल्याइएको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि उडान र ठूलो जहाज सञ्चालन गर्ने प्रमुख शाहले सुनाए ।
यहाँका पर्यटन व्यवसायीले हवाई उडानले नेपालगन्ज र पोखरा क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरेका छन् । नाटा बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले नेपालगन्ज–पोखरा रुटमा यात्रुको चाप धेरै भएको बताए । आफूहरूले थालेको अभियानलाई साथ दिंदै बुद्ध एयरले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको उनले बताए । रारा, कैलाश मानसरोवर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके निकुञ्जलगायत पश्चिम क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल घुम्नका लागि आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर नेपालगन्जमा आधा दर्जन बढी तारेहोटल सञ्चालनमा छन् ।
नेपालगन्ज नाका हुँदै आउने भारतीय पर्यटक यस क्षेत्रमा घुमेर पोखरा जाने र पोखराबाट नेपालगन्ज आउन चाहने पर्यटकलाई यस उडानले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सिधा हवाई उडानका लागि विगतमा जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीलगायतले पहल थाले पनि सरकार र विमान कम्पनीको बेवास्ताका कारण उक्त मुद्दा त्यत्तिकै थन्किएको थियो । सीधा हवाई उडान नहुँदा पर्यटकलाई आर्थिक मार पर्नुका साथै झन्झटिलो हुने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रले बेहोर्नु परिरहेको र अब पश्चिम क्षेत्रका थुप्रै पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ बताए ।
नेपालगन्ज–पोखरा उडानको प्रतिव्यक्ति भाडा ४ हजार ९ सय ९५, ५ हजार ५ सय ६५ र ७ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसका साथै नेपालगन्जबाट पोखरा घुम्न जाने पर्यटकका लागि आउने–जाने भाडा, दुई रात बास, नास्ता र विमानस्थल–होटलसम्म यातायातको व्यवस्थासहित ११ हजार र पोखराबाट बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकलाई सोही सुविधासहित १३ हजार ९ सय रुपैयाँको विशेष प्याकेज ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १२:०३
पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार साहिद अफ्रिदी काठमाडौंमा
अझै छ यिनमा जोस
‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग : राइजिङ शीर्षमा, शंखमूलको जित
‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग : रेफ्रीप्रति चर्को गुनासो
सिम्रिकलाई जीएफसी कप